mhando 0.3.9 – More sanduko
Zvita 26, 2009 kubudikidza chipo 5 Comments
Shanduro itsva zvinosanganisira mbiri zvikuru zvinhu. Chokutanga Kukwanisa kugadzirisa mitauro pamusoro Widget, zvino unogona kuisa kwako mutauro default wokutanga kana kufamba mitauro kumativi chero nzira waunoda. Icons sokuti kukuudzai kana mutauro chinotsigirwa Bing uye Google uye kana mutauro zvakanyorwa chimiro kodzero nokuruboshwe. Unogona chinja pakati zita yepakutanga mutauro wayo Chirungu zita, saka kunzwisisa izvo mutauro uri rinova kunyange akachenurwa.
Takavawo vakatamira dzimwe mafaira kumativi uye chakaita kuti ajax kupinda faira, ichi kunoita humwewo romukova pazviruva wandisa (tinotarisira, ngatiregei kuziva kana ukaona netsikidzi) uye anoita kazhinji zvinhu snappier. Kana anoshandiswa chete unzipping shanduro itsva pamusoro tsaru, zviri ikozvino ngozi kuidzima mafaira zvose dzisina vemu sub-Directories (kunze nokuti transposh.php) Heck, isu kunyange vanokurudzira kuti…
Vamwe paunowana nyaya dziri kurongwa chinotevera kusunungurwa, uye kana uchida kuramba uchiziva. Tevedzera kwedu Twitter rukova…
Ina Under: Release zviziviso Tagged With: kudzora centre, kuduku, rusununguko, Widget, Wordpress plugin
Chivabvu 21, 2009 kubudikidza chipo 2 Comments
Ina Under: Release zviziviso Tagged With: kuduku, Widget